Elikhulu isibonisi idayagonali, processor enamandla, isamba umxhwele inkumbulo ngokwanele umthamo webhethri - konke kukhona kule Samsung Galaxy Note 2. Izimpawu hardware ne-software noma izakhi zalo zizonikezwa njengengxenye le nto.
Le divayisi ibekwe ngumkhiqizi njengoba igajethi premium. Ngakho, imishini futhi kufanele abe efanele. Kodwa namanje, abanye imibono kuye lapho. Ngaphezu idivayisi yeselula, e version Boxed zedivayisi kuhlanganisa izingxenye ezifana nezinye izinsimbi: Ibhethri esibonakalayo ikhebula ye-PC uxhumano, ishaja, insimbi yokuloba futhi manual umsebenzisi. Lolu hlu ngokusobala aliwona-headphone ngokwanele, zokuzivikela ifilimu ikhava yememori khadi. Esimweni sokuqala, kukhona ngisho isikhala seso ezifanele, kodwa headset stereo enikeziwe khona. Nakuba evikelwe phambi panel kanye ingilazi "Gorilla Eye" isizukulwane 2nd, kodwa ifilimu ezengeziwe ukuze kulondolozwe esimweni saso sokuqala kungaba ngokucacile ngokweqile. Isimo siyefana ne izinhlangothi futhi ikhava yangemuva - kunjalo futhi engcono evikelwe, kodwa ngalesi sikhathi ngosizo ikhava. Nakuba esishunyekiwe isitoreji umthamo 16 GB umxhwele, kodwa ungakwazi ukudlulisa ngokumisa i-flash khadi zangaphandle. Lokhu kuzovumela ekusetshenzisweni ngokugcwele inkumbulo subsystem ku Samsung Galaxy Note 2. Izici (umyalelo etshengisa lokhu ehilelekile) drive bangaphandle: uhlobo ikhadi micro-SD, futhi umthamo wayo obuyisilinganiselo-32 GB. Lokhu ngokuqinisekile kuyoba okwanele ukuze uthumele lapha amafayela siqu komsebenzisi (izithombe, amavidiyo, izincwadi, umculo).
Umklamo esingokoqobo Note 2, ngoba "Galaxy" umugqa amadivayisi. Iningi phambi iphaneli yokubonisa. Kulokhu, idayagonali salo 5,55 amayintshi. Ngenhla umkhankaso efakwa endlebeni, ikhamera kanye "amafasitela" izinzwa. Ngezansi, ngokuqinile phakathi, elise ukhiye ikakhulu mechanical ukubuyela desktop main. Kanye emaphethelweni kulo bangabantu izinkinobho touch-sensitive "Emuva" futhi "Imenyu". Njengoba kuphawuliwe ngaphambili, ngaphambili iphaneli ivikelwe ngokugcwele ingilazi "Gorilla Eye" in the Samsung Galaxy Note 2. izici inikezwe ngumkhiqizi kucecevu idatha libonisa ukuthi sisebenzisa isizukulwane sesibili. On the edge elungile isuselwe inkinobho idivayisi Ilokhi, futhi kuxazululwe phezu senhliziyo kwesokunxele lokulawula ivolumu negajethi. Ohlangothini flip umkhankaso port-micro-USB ye-smart phone. Kukhona ukuvulwa ukugcina lokuloba. A ukuboniswa engenhla lesibopho umsindo port 3.5mm. On ikhava smartphone emuva, ngaphandle logo yomenzi, futhi imbobo ikhamera main zikhanyiswa a LED olulodwa kanye loud speaker.
Computing igajethi inhliziyo
Kakhulu isixazululo Processor Ukusebenza esetshenziswa Samsung Galaxy Note 2. Izimpawu ezinjalo Exynos 4412 4 Computing iyunithi esekelwe izakhiwo "A9", ngaleso umthwalo esiphezulu kungenziwa yashesha kuze kufinyelele 1.6 GHz. Made Semiconductor yayo chip ku 32 inqubo nm futhi ezingeni obukhulu kwamandla ukusetshenziswa bengase bazikhandlele 4 Watts. Lokhu indlu ukuthuthukiswa inkampani "Samsung" nokuthi lokhu chip isetshenziswa Flagship devayse 2012 - Galaxy S3. Futhi nakuba ngezindinganiso embonini amagajethi mobile engu-3 - isikhathi umxhwele, kodwa ngisho namanje, lokhu processor angabhekana ngayo cishe noma yimuphi umsebenzi. Ngokwesibonelo, okufanayo "Asphalt 8" ukusebenzisa kudivayisi, ngisho noma hhayi ekushoneni esiphezulu. Ngoba imisebenzi esele (ukubuka inthanethi inthanethi, video sokudlala, umculo wokulalela) lizinga lekuphumelela ngokweqile, futhi nabo spravletsya ngaphandle kwezinkinga.
Ukubonisa kanye ihluzo isixazululo
Esinye sezici eziyinhloko zedivayisi Isibonisi idayagonali, lapho, njengoba kuphawuliwe ngaphambili, kuyinto umxhwele 5,55 amayintshi. Wenza "SuperAMOLED" ubuchwepheshe. yokuhumusha Color, ukukhanya kwayo ezingeni elamukelekile. Eyesibili ingxenye ebalulekile ihluzo subsystem ividiyo namafutha Mali-400MP4 ku Samsung Galaxy Note 2. Izici (sibonga ifoni kubo namuhla kusivumela ukuxazulula iningi lezinkinga) kuthiwa iyamangalisa ngempela kule adaptha. Iyakhompyutha ukusebenza ngayo 15,8 GFLOPS ezisebenza at imvamisa of 440 MHz chip.
Ikhamera: ukuthi bangenzani
Amabili eliphezulu amakhamera efakwe kule Samsung Galaxy Note 2. Izimpawu kanye nezithombe ze-main zingabantu iyamangalisa ngempela. Yena inzwa isici 8 megapixel. Kulokhu, kukhona autofocus futhi izibani LED. Futhi ezingeni Uhlelo lwenteke ebusweni ukubona algorithm. Ngenxa yalokho, izinga izithombe etholwe ikhamera eyinhloko kule divayisi, akuyona egculisayo. Isiqophi kulotshwe phezu kwalo njengoba "P 1080". kuphakama imibuzo efanayo ikhwalithi amavidiyo wayo: esihle umbala imifanekiso, isithombe akucace. Ngaphambili ekamelweni Kusekelwe nesizotha more touch iyunithi 1.9 MN. Ukuze uthole isithombe elilungile akwanele okwamanje. Kodwa i- "selfie" futhi amakholi wevidiyo kwanele, futhi ukuxazulula lezi zinkinga futhi kuhloswe.
Samsung Galaxy Note 2 N7100 inama ehleleke kahle isitoreji subsystem. Inani RAM ukufakwa kuba 2GB. Usayizi okuhlangene drive yangaphakathi kuyinto 16 GB. Kulokhu, umsebenzisi angasebenzisa ukufaka izinhlelo futhi sigcine yabo idatha yomuntu siqu , 11 GB kuphela. Lena ngempela anele operation ntofontofo futhi ezijwayelekile. Ezinye izindaba zika-isikhala elalihlala isofthiwe yohlelo. Uma 11 GB mahhala isitoreji sangaphakathi umsebenzisi ngeke ngokwanele, ungakwazi ukufaka flash card sangaphandle GB 32. I slot okuhambisanayo kuyinto, kule divayisi. Ngokuqinisekile bekungeke ukuxazulula inkinga yokuntuleka yesikhala samahhala kule divayisi. Kodwa ukwaziswa okuwusizo kakhulu is best agcinwe kunoma iyiphi isevisi ifu. Lokhu kuzokuvumela ukuba alulame uma umonakalo noma ukweba devaysa ngaphandle kwezinkinga.
Ubukhulu zedivayisi umxhwele (omunye diagonal isibonisi okuyinto kuphela - 5,55 amayintshi) kanye lezikhali umthamo elincane ke akakwazanga ngiziqhayise ngezinga umxhwele yokuzimela. Ngenxa yalokho, lo umthamo webhethri 3100 mah ku Samsung Galaxy Note 2. kwebalingisi yebo, kukude oluvelele kuze kube manje. Kodwa lesi silinganiso kumanele idivayisi ezingeni phakathi kwebhethri Umthwalo owodwa kungenzeka welule izinsuku 2-3. Uma kucatshangelwa idayagonali kwesikrini futhi ihadiwe yefoni ukugcwalisa ukuba kakhulu ukwandisa kwaleli nani ngeke zisebenze. Uma ukusebenzisa ezinye isicelo isisetshenziswa khudlwana (isb, "Asphalt 8"), impilo yebhethri kuzoncishiswa amahora 6-8.
An uhlu umxhwele izindlela ukuxhumana nezwe elingaphandle yaqaphela Samsung Galaxy Note 2. Izici kulokhu anakho ezifana:
Ukusekela GSM zeselula 3G. Nokho, idivayisi enikeziwe slot eyodwa ikhadi le-SIM, futhi ngeke basebenze kuleli "Duos". Esimweni sokuqala, ungabuka kuphela amasayithi linesizotha kwi-inthanethi futhi ukuxhumana in amanethiwekhi omphakathi. Futhi manje ngosizo 3G ubuchwepheshe, zonke lezi imikhawulo ziyasuswa, ungabuka ngisho ividiyo ku-inthanethi.
Ungakhohlwa mayelana Onjiniyela Korean futhi "I-Bluetooth". Kuyinto esisemqoka ezimweni lapho kudingeka ukuba uxhume-earphone engenantambo efonini yakho noma wabelane siqu amafayela amancane kuya idivayisi yeselula efanayo.
Futhi, idivayisi linemojula "Wi-Fi". nguye nse 3G, ikuvumela ukuba uthumele futhi wamukele idatha ku web global kunoma iyiphi zenani ngesivinini ezinhle. Amasayithi amaningi "ezisinda" kangaka azolayisha ngokushesha okwanele.
Ukuze uzulazule e devayse izinhlelo ezimbili kunikezwe. Omunye wabo ixhunyaniswe iziphuphutheki futhi bangasebenza njengoba JPS, futhi GLONASS. Nokho, yesibili kusekelwe ukusetshenziswa indawo kwemibhoshongo iselula futhi okuthiwa iA-JPS.
Phakathi interfaces olunezintambo, ugqamise khona eshiwo ngaphambili-micro-USB nezimbobo umsindo. Eyokuqala ibhethri noma xhuma PC. Eyesibili isetshenziswa izimo lapho kudingeka ukuletha isignali umsindo ukuze le speaker esingaphandle.
Ngenxa isofthiwe isisekelo kusukela "Android" in the Samsung Galaxy Note 2 N7100. Izici Zabantu ingxenye isofthiwe uhlelo lubonisa version 4.1. Ngaphezu kwalokho, phezu kwe-software uhlelo, efakwe igobolondo nokuphathelene "TachViz". Nayo ungakwazi ngokushesha futhi kalula oyifisayo isofthiwe smartphone interface ukuze uvumelane nezidingo zakho. Operation Smooth nokunokwethenjelwa kwe-software uhlelo kuphakamisa akukho ukuphikisa.
Isethi ejwayelekile software ezifakwe uku Samsung Galaxy Note 2. Izici (izibuyekezo zisikisela) ukuvumela isofthiwe okuningi ke ngaphambilini ibekwe. Program ozifakile ke kusengaphambili isethi esezingeni amagajethi, amaklayenti zokuxhumana kanye software yesistimu yokusebenza "Google" esakhelwe ngaphakathi. Yonke enye into kuzodingeka ukulayisha devaysa umnikazi wesitolo lokusebenza. Kodwa, ngakolunye uhlangothi, kungenzeka ukuba ulungise kahle kudivayisi ukuze uvumelane nezidingo zakho.
Samsung Galaxy Note 2 N7100 idivayisi kuyinto premium. Yingakho kwenza kwaba nesidingo esikhulu, okuyinto ngokuphelele igajethi. Akanalo ubuthakathaka. Emazwini akhe athile kubangele isethi ephelele kudivayisi. Kodwa, ngakolunye uhlangothi, umnikazi idivayisi ezifana ezibizayo kungaba awucabange ncamashi ingasaphathwa uthole ikhava, ifilimu zokuzivikela futhi kudivayisi isitoreji sangaphandle. Futhi eyolanda iyiphi yalezi izesekeli ezifana lokho esikudinga ngempela-ke. amaphutha angeziwe kule smartphone akuyona.
Nakuba olwakhishwa ngo-2012, le gajethi, kodwa noma iyiphi isofthiwe yesimanje ukukhokhela Samsung Galaxy Note 2. Izimpawu hardware ne-software noma izakhi zalo njengoba kukhonjisiwe. Intengo yale foni is lehla dollar angu-200. Lona isilinganiso esiphelele intengo, ukusebenza nekhwalithi.
Ikhodi Odessa. Indlela ukufinyelela leli dolobha?
Izincwadi Russian kwekhulu lama-20, isikhathi ukwakheka, abameleli main
Shintsha - ukuthi iyini ngamagama alula?